ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏ သားဖြစ်သူကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် နိုဝင်ဘာလတွင် အမိန့်ချ? - Yangon Media Group
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်၏ သားဖြစ်သူကို ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် နိုဝင်ဘာလတွင် အမိန့်ချ?
၎င်းင်းတရားစွဲဆိုထားရာရုံးသို့ ဖြူထိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်ဝီရို့ ပါအိုအင်နှင့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖွန်သစ်ဝီချာ ယာချိုင်း၊ ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းခွန်ရင်ဆူခါရတ်ကီယူရာဖန်နှင့်ချိုင်းကေစင်နီတီဆီရီနှင့် အစ်မဖြစ်သူတို့ လာရောက်ကာ အမှုစစ်ရာသို့ လာရောက်နားထောင်ကြသည်။
”ကျွန်တော်ကတော့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုခံချေပမှာပါ”ဟု ၎င်းကထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။ ယခုအမှုငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မစ္စတာသက်ဆင်၏ ဇနီးဟောင်း ခွန်ရင်ပို့ဂျာမန်နာပွန် ဘီဂျရာအားလည်း ပူးတွဲတရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲထားသည်။
လိင်တူချစ်သူများကို သေဒဏ်ပေးမည့် ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပေးအပ်ထားသော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကိုေ
ကွဲကွာနေသည့် မိသားစုများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ရန် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ဆွေးနွေး
ဂျေရုဆလင်ကို အစ္စရေးမြို့တော် အဖြစ် အမေရိကန် အသိအမှတ်ပြုပါက ပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်မည်ဟု အာရပ်အဖွဲ??